Iinkcukacha ngokukhawuleza malunga ne-Uranium Element
Ulwazi malunga ne-Element Uranium
Mhlawumbi uyazi i-uranium yinto kunye nokuba i-radioactive. Nazi ezinye iinjongo ze-uranium kuwe. Unokufumana ulwazi olunzulu malunga ne-uranium ngokutyelela iphepha lokungena kwe- uranium .
I-uranium echanekileyo yinyithi e-white-silvery.
Inani le- athomu le -uranium li-92, okuthetha ukuba i-i-urine i-i-atyoni ineeprotoni eziyi-92 kwaye iqhelekileyo i-electron 92. I-isotope ye-uranium ixhomekeka kwindlela i-neany neutron eyenayo ngayo.
Ngenxa yokuba i-uranium i-radioactive kwaye isoloko ibala, i- radium ihlala ifunyenwe nge-uranium ores.
I-uranium ibizwa ngokuba ngumhlaba u-Uranus.
I-uranium isetyenziselwa ukuvelisa izityalo zamandla enyukliya kunye neenqwelo eziphezulu ezithintekayo. I-kilogram enye ye-uranium-235 iyingqikithi ingavelisa ~ 80 i-terajoules yamandla, elingana namandla anokuveliswa ngamathani ayi-3000 wamalahle.
I-ore yendalo ye-uranium yaziwa ngokuba yi-fission ngokukhawuleza. I-Oklo Fossil Reactors yaseGabon, eNtshona Afrika, iqulethe amacandelo angama-15 asebenzayo angasasebenzi. I-ore yemvelo yabuyiselwa kwixesha lokuqala ngaphambi kokuba i-uranium ye-3% yendalo i-uranium-235, eyayiyingxenye ephezulu ngokwaneleyo yokuxhasa ukuphendulwa kwetyukliya eqhubekayo.
Ubuninzi be-uranium bu malunga no-70% phezulu kunekhokelo, kodwa ngaphantsi kwegolide okanye i-tungsten, nangona i-uranium inesisindo esiphambili se-atomiki sezinto eziqhelekileyo (okwesibini kuya kwe-plutonium-244).
I-uranium idla ngokuba ne-valence ye-4 okanye ye-6.
Imiphumo yempilo ye-uranium ngokuqhelekileyo ayihambelani ne-radioactivity yesixhobo, kuba iinqununu ze-alpha ezikhutshwa yi-uranium azikwazi ukungena kwi-skin. Kunoko, impembelelo yezempilo ihambelana nobutyhefu be-uranium kunye namaqumrhu ayo. Ukungena kweemveliso ze-uranium ezixakekileyo kungabangela ukukhubazeka kokuzalwa kunye nomonakalo wokhuseleko lomzimba.
I-powder e-uranium ehlukaniswe ngokupheleleyo i-pyrophoric, nto leyo ithetha ukuba iya kutshaya ngokukhawuleza kwiqondo lokushisa .
Izizathu 5 Ufanele Ufunde uFredrik Backman "Umntu Obizwa ngokuba ngu-Ove"
Uluhlu lweziganeko zamaPapa aphakathi
Yonke Imayelana NeziKronike ZaseNarnia noMbhali CS Lewis